China Black Cotton canvas Cloth Tote Shopping Hand Bag na Akara na Bottom Low MOQ Emeputa na Supplier | Zhihongda
Black Cotton Canvas Cloth Tote Shopping Hand Bag na Logo na Bottom Low MOQ
AKW MACKWỌ AKWINEKWỌ & ECO-FRIENDLY MATERI OF COTTON. A na-eji akwa akwa dị mma ma dị mma, nke nwere ike ijide 50 + pound nke ihe oriri ma dochie akpa nri nri 2-3. Site na iji reusable nri nri ugboro ugboro arụ ọrụ dị arọ & idebe plastik site na ebe mkpofu & osimiri!
1. Ahaziri agba, size, ụdị, wdg, niile ina nwere ike nweta
2. AKWASHKWỌ AKWASHKWỌ & ECO-FRIENDLY MATERIAL OF COTTON. A na-eji akwa akwa dị mma ma dị mma, nke nwere ike ijide 50 + pound nke ihe oriri ma dochie akpa nri nri 2-3. Site na iji reusable nri nri ugboro ugboro arụ ọrụ dị arọ & idebe plastik site na ebe mkpofu & osimiri!
3. Ezigbo maka ọrụ na onyinye! Ọ dị mma maka Mee N'onwe Gị! Zuru oke maka ọrụ ụbọchị nne, ọrụ Mee N'onwe Gị! Nka maka onyinye ekeresimesi! Akpa akpa ndị ahụ dị irè maka ịmepụta ọ bụla ihe oyiyi sublimation. Nnukwu mmemme! Can nwere ike iji acrylic paint na ụmụaka nwere ihe gbawara. Ezigbo ogo ma dị mma maka eserese akwa.
4. Na-eche ihe ị ga-enye maka ọrụ nka? Akpa ndị a na echiche nke iji ihe ịchọ mma chọọ ya n’onwe ha. Nnukwu Ogo, sachara nke ọma, ga-adị mma maka ịcha mma! Zuru okè ka agba! Tote dị ukwuu maka itinye HTV maka ahaziri iche! Akpa ndị a bụ ezigbo tote size. Ha nwere ike dabara n'ọtụtụ ihe n'ime ha ma mekwaa ha nke ọma. Nwere ike iji acrylic paint na brushes maka paint.It is just thin enough to paint on it! Ha dị mma nha iji jide akwa agba nke ọma.
5.1 Afọ NO-RIP nkwa: Anyị ga-eji dochie ma ọ bụ nkwụghachi akpa ọ bụla dọwara ma ọ bụ mebie n'ime 1 afọ nke zụọ. Chekwaa Ego na Iwu Mpempe Akwụkwọ Ọtụtụ na Akara Anyị!
Nkebi Aha Black Cotton Canvas Cloth Tote Shopping Hand Bag na Logo na Bottom Low MOQ
Nke gara aga: 100% Cotton Canvas Tote Black ppingzụ Ahịa Reusable nri Bag na-ebipụta N'ogbe ^ p
Osote: Recycled larịị kwaaji owu Tote bag ejiri na Bottom Gusset
Cheap 100% Cotton Kanvas ppingzụ ahịa Tote Bag na ...
Nkwalite eco oghere awọ isi awọ owu kwaaji Tote bag ...
Omenala Mkpụrụ Mkpụrụ osisi Cotton Mesh Drawstring Bag
Omenala Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ahịa ...
Coler 100% dị ọcha owu kwaaji Tote ahịa akpa ...